1. Open josm-latest.jar
2. Download button ကိုနှိပ်ပါ
၄ ကိုယ်နေတဲ့ မြို့နေရာကို ရှာဒေါင်းပါ။
၅. ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင် စပြီး ပြင်လို့ရပြီ
၆ အကြီးချဲ့ပြီး လမ်းတစ်လမ်းလောက်ကို ရွေးကြည့်ပါ။ Select လုပ်ချင်ပါက s key ဖြင့်လုပ်ပါ။ အသစ်ထပ်ဆွဲလိုပါကakey ဖြင့် အသစ်ထပ်ဖြည့်ပါ။ Preset menu မှတစ်ဆင့် လမ်းအမျိုးအစား ဥပမာ Highway> teritiary အဲဒါတွေကို လိုက်ဖြည့်ပါ။ အထူးသတိပြုရန်မှာ...... name > Zawgyi font, name:my> Unicode, name:en> English စသည့်ဖြင့်ထည့်လျင် ပိုအဆင်ပြေပါမည်။ ယခုမြေပုံတော်တော်များများက Unicode only ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖုန်းတော်တော်များများက Zawgyi font သုံးနေကြတုန်းမို့ပါ။
၇ အသစိထပ်ဆွဲမယ်ဆိုပါက ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လမ်းရှိမှန်း သိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဂြိုဟ်တုမြေပုံကို အခြေခံပြီး ဆွဲကြရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ပါ။
အောက်ဆုံးက အပြာရောင်မျှားလေးက မိမိစက်ထဲကို .osm file format အနေနဲ့ သိမ်းပေးထားဖို့ပါ။ အစိမ်းရောင် အပေါ်ထော်နေတဲ့ဟာက Server ကို Upload လုပ်ဖို့ပါ။ အလိုလုပ်ရင် Username password လိုပါမယ်။ အဲဒီအတွက် www.openstreetmap.org မှာ အကောင့်ဖွင့်ပေးထားဖို့လိုပါမယ်။
at Friday, June 24, 2016 တင်ပြသူ Dr Myo Thiha0comments
Myanmar OSM Map Drawing
ခုခေတ်မှာ လူတိုင်းနီးပါးက အန်းဒရွိက်ဖုန်းတွေ သုံးလာကြပြီဆိုတော့ အဲဒီဖုန်းကို မိမိသွားလိုရာကို ညွှန်ပြပေးမယ့် ဂျီပီအက် တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းသုံးနေကြပါပြီ။ အခုလက်ရှိက မြေပုံအကုန်မရဘူး။ အဲဒီတော့ အကုန်လုံးရအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြေပုံတွေက မြို့ကြီးတွေမှာပဲ ရသေးတာ။ အဲဒါတောင် မပြည့်စုံသေးဘူး။ ပြီးတော့ ဆွဲတဲ့သူတွေက မြန်မာတွေ ပါချင်မှပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ့်ဒေသမှာရှိတဲ့ အိုင်တီဝါသနာရှင်တွေက ကိုယ့်အရပ်ဒေသ မြေပုံတွေကို ကိုယ်တိုင်ဆွဲပေးကြဖို့ပါပဲ။
အဲဒီလို ဆွဲဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Open Street Map ကိုသုံးပါမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီမြေပုံကို ဖုန်းထဲကို ထဲကို ထည့်သုံးပါမယ်။ အဲဒီမှာ သူက အားသာတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အသေးစိတ်မြေပုံကို 15 MB လောက်ပဲရှိတာပဲ။ ယုံလားတော့မသိဘူး။ မယုံရင် တင်ပေးမယ်။ ပြီးရင် စမ်းကြည့်ကြပါ။ မြို့တစ်မြို့အတွက်ဆို 1MB တောင်မပြည့်ပါဘူး။ အဲဒါ အသေးစိတ် အကုန်ပါပြီးသားပါ။ ပြီးတော့ ပိုကောင်းတာက အင်တာနက် လုံးဝမလိုတာပါပဲ။ ပိုက်ဆံမကုန်ပါဘူး။ ဂူဂယ်မြေပုံဆို အင်တာနက်နှေရင် အဆင်မပြေဘူး။ ပိုက်ဆံလည်းကုန်တယ်။ ခုဒီမြေပုံဆိုရင်တော့ အလကားလည်းရမယ်။ အင်တာနက်လည်း မလိုဘူး။ ကြိုက်သလို ပြင်သုံးလို့လည်းရတယ်။ ဘာလိုသေးလဲ။ ဘာလိုသေးလဲဆိုတော့ ကော်ဖီမစ်တစ်ခွက်လောက်ပေါ့။
ကိုင်း တော်ကီပစ်တာ များပြီး အင်ထရိုလေး စလိုက်ကြရအောင်။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်နေတဲ့ မြို့ရွာ တစ်ခုကို မြေပုံဆွဲဖို့အတွက် ပထမဆုံး ပြင်လို့ရမယ် မြေပုံဖိုင်တစ်ခုလိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် နေတဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ကို ဘယ်လိုဆွဲသွားလဲဆိုတာကို အသေးစိတ်မဟုတ်တောင် နားလည်နိုင်လောက်အောင် ရှင်းပါထားပါ့မယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့ မိမိ ရပ်ရွာ၊ ဒေသမြေပုံကို ဆွဲပေးစေချင်ပါတယ်။ အားအားရှိ အွန်လိုင်းတက် ဖွန်ချည်းပဲ ကြောင်နေရတာ ကြာတော့ ပျင်းစရာကြီး။ ဒီလို ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းလေးလည်း လုပ်ပေးအုန်းပေါ့။
အဆင့် ၁။ ဂျာဗားကို ဒီကဆွဲပါ။ ပြီး အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ။ စက်တော်တော်များများမှာတော့ သွင်းပေးထားလေ့ရှိပါတယ်။
အဆင့် ၂။ မြေပုံကို ပြင်ဖို့အတွက် JOSM ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ကို ဒီကနေဆွဲပါ။ ပြီး အဲဒီ josm-latest.jar ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို c:/map ဆိုတဲ့ ဖိုဒါအသစ်ဆောက်၊ အဲဒီထဲ ကူးထည့်ပြီး ကလစ် နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ။ ဆော့ဝဲပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၃။ မော်လမြိုင်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက် မြေပုံကို ဒီကဆွဲလိုက်ပါ။ mlm.zip ဖိုင်ကို ဖြည်ထုတ်ပါ။ mlm.osm ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးရလာရင် c:/map ဆိုပြီးထည့်ပြီး သိမ်းထားပေးပါ။
အဆင့် ၄။ JOSM program ကနေ Open File ဆိုပြီး စောစောက mlm.osm ဖိုင်ကို ရွှေးပေးပါ။
ဒါဆိုရင် မော်လမြိုင် မြို့ မြေပုံကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်လို့ရပါပြီခင်ဗျား။ သင်ကိုယ်တိုင် ပြင်ထားတဲ့ဖိုင်ကို www.openstreetmap.orgကို ချက်ချင်းတင်ကြည့်ရအောင်။ အဲလိုတင်ဖို့အတွက် အဲဒီဆိုဒ်မှာ အကောင့်အသစ်ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်။အကောင့်အသစ်ဖွင့်တာမခက်ပါဘူး။ အကောင့်အသစ်တစ်ခုရပြီ ဆိုတာနဲ့ JOSM Program > Edit > Preference ကိုသွားပါ။ F12 နှိပ်လည်းရတယ်။ ကမ္ဘာလုံးပုံလေးနဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီး သင့် Username and password ကိုဖြည့်ထားပါ။ ဒါဆိုရပါပြီး။
စောစောက သင်ပြင်ထားတဲ့ မြေပုံကို ဆိုဒ်ပေါ်ကို တစ်ခါတည်း တင်ချင်ရင် Ctrl + U ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ၁ မိနစ်လောက်ဆို ဆာဗာပေါ်ရောက်သွားပါပြီ။ အဲဒီမြေပုံကို ပြန်ကြည့်ကြည်ပါ။ အဆင်ပြေသလားဆိုတာကိုပါ။
အိုကေ ဒါက ပရဟိတ အနေနဲ့ မြေပုံဆွဲတဲအထဲကို ကိုယ်တိုင် ဝင်ဆွဲတဲ့နည်း။
ကိုယ်ဆွဲပြီးသား မြေပုံကို ချက်ချင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအတွက် သီးသန့်ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျား
at Wednesday, November 13, 2013 တင်ပြသူ Dr Myo Thiha0comments
မြေပုံ သင်ခန်းစာ (မိမိအတွက် မှတ်စုသဘောရေးထားခြင်းသာ)
Oruxmap donwnload link OziExplorer Download Link Oruxmap Desktop download Link
at Wednesday, October 16, 2013 တင်ပြသူ Dr Myo Thiha0comments
Software Download (magnet)
at Thursday, November 15, 2012 တင်ပြသူ Dr Myo Thiha0comments
Acronis True Image Home 2011-2012-2013 Edition
Software Download (http)
ဒီဆိုက်ကဆော့ဝဲများကို ဒေါင်းရန် လိုအပ်သော ဆော့ဝဲများ
1. IDM (သူ့ကိုဆွဲဖို့ အောက်ကဟကိုအရင်သွင်းပြီးမှဆွဲပါ)
အဲဒီဆော့ဝဲများကို မိမိကွန်ပြူတာထဲမှာ သွင်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။